Ronaldo Iyo Romario Oo Fiintu Dhex Miranayso
Ronaldo Iyo Romario Oo Shir Brazil Ka Dhacay Is Barbar Fadhiya
Dagaal afka ah ayaa markale ka dhex qarxay xidigii hore ee xulka Brazil ,Ronaldo iyo Romario, kadib markii ay weerar afka ah isu mariyeen saxaafada shallay.
Weeraryahankii hore ee naadiga Inter Milan , Ronaldo , ayaa ku eedeeyey xidiga afka hore mucjisada ku qabay ee Romario inuu markale weerar ku qaaday shaqsiyadiisa iyo inaanu fulinin balanqaadkii tigidhada bilaash ka ah ee uu ciyaaraha koobka aduunka ugu ballan qaaday dadka aan laxaad koodu dhamayn.
Romario oo hadda ah xubin golaha xeer dejinta ka mid ah oo cod karna ah , ayaa ku eedeeyey Ronaldo inuu ballan qaad sameeyey ilaa hadana aan laga haynin. Ronaldo oo ka tirsan gudiga qaban qaabada Koobka Aduunka ee Brazil ka dhacaya ayaa isna eedaas kaga jawaabay in cida ka soo bixi weyday ay tahay xidhiidhka kubada cagta wadanka Brazil.
Ronaldo oo dhibsaday weerarka aan kala go’a lahayn ee kaga imanaya saaxiibkii ayaa sheegay inaanu garanayn sababta uu dagaalka joogtada ah ugu hayo Romario.
“Waxa caado iska noqotay inaad aragto Romario oo meel fagaare ah iga cambaaraynaya , isagoo sheegaya inaan dayacay shaqo aan gacmahayga ku jirin.” Ayuu Ronaldo ku yidhi qoraal uu ku baahiyey baraha shacabka ee inter net ka uu ku leeyahay.
“Maka fursad raadis baa mise waa ka aqoon daro, ma garanayo. Waxaan garanayaa oo kaliya inay wakhti iyo enerji lumin tahay inaad ku foognaato shaqsiyadayda. Xildhibaanka waxa la gudboon inuu ku dedaalo sidii uu shacabka xeer suuban ugu soo saari lahaa , taas oo dhamaantayo faa’iido noo leh.”
Ronaldo ayaa sheegay in ballanqaadka 32,000 ee tigidh ee loogu tallo gallay dadka laxaadkoodu dhiman yahay inay ku daawadaan koobka aduunka, uu sameeyey xidhiidhka kubada cagta Brazil , laakiin aanu isagu ballanqaadin.
“Ma ahi siyaasi , afkoodana kuma hadli karo (xidhiidhka kubada cagta). Anigu ma ballanqaadi karo waxaanan fulin karin.,” ayuu yidhi Ronaldo , waxaanu intaas sii raaciyey, inuu hubo in Romario og yahay in ballan qaadka ay sameeyeen cida ku shaqada lihi balse aanu Ronaldo ahaan samaynin.
Lampard Oo Shaaca Ka Qaaday Inuu Chelsea Ka Tagayo
Full Time: Real Madrid 3-3 Las Palmas
Pedro Oo Ka Hadlay Sababtii Uu Chelsea U Doortay Wakhti Laga Filayey Manchester
Sir Culus: Messi Oo La Sheegay Inuu Ku Guuleystay FIFA Ballon d’Or Iyo FIFA Oo Beenisay
Jose Mourinho Oo Doonaya Inuu Ciyaartoy Muhiim Ah Kasoo Qaato Chelsea
Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers – Full Game Highlights | October 6, 2017 | 2017 NBA Preseason